Mont Blanc: njirimara, geology na biodiversity | Netwọk Mgbasa Ozi
Nke kachasi elu na Western Europe na otu nke kachasi mara na niile Alps bụ Mont Blanc. Ọ pụtara ugwu dị ọcha na French ma ọ dị n'etiti etiti mara mma nke ọdịda anyanwụ nke Caucasus ma bụrụkwa agbata obi nke ọtụtụ glaciers na-azụ osimiri niile gbara gburugburu. Ebe ọ bụ ugwu ugwu ndị ugwu na-achọsi ike, ọ bụrụla ugwu a ma ama n ’ụwa.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji kọọrọ gị njirimara, geology na mmalite nke Mont Blanc.
2 Ntughari Mont Blanc
3 Flora na anụmanụ nke Mont Blanc
Anyị maara na ịrị ugwu bụ ihe a na-ahụkarị n'ugwu. Ma ọ bụ na Mont Blanc ọ bụ ọrụ a na-arụkarị. Karịsịa n’oge ọnwa ọkọchị ị na-ahụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-arị ugwu na nke ugwu na-anwa iru nzuko ahụ. Ndị mbụ rutere elu bụ bụ Jacques Balmat na Michel Gabriel Pacard na 1786Afọ iri abụọ na isii kemgbe onye ọkà mmụta ihe banyere ala na onye na-amụ banyere ala bụ Horace-Bénédict de Saussure kwupụtara ụgwọ ọrụ dị elu maka onye ọ bụla meriri. Ebumnuche nke ọkà mmụta banyere ala a ga-enwe ike ịgbakọ ogologo kachasị elu nke elu a. Iji mee ihe ọmụmụ ndị a, achọrọ m onye na-arị ugwu iji ruo n’elu.
Mont Blanc dị n'akụkụ ókè n’agbata France na Italytali na ọdịda anyanwụ nke Ugwu Caucasus. Ọ bụ nke ugwu Alps ma gbasaa ruo mpaghara Switzerland. Ọ nwere peculiarity na nke ahụ bụ na ọ nwere oke pyramidal. Ugwu a dị na ndịda ọwụwa anyanwụ France. Ogologo kachasị elu nke elu bụ 4809 mita karịa ọkwa mmiri. Ya mere, ọ na-abụ ihe ịma aka nye ọtụtụ ndị ugwu na-anwa iru nzuko ya n'oge oge ọkọchị.
Dị ka a tụrụ anya ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ọkọchị, e ji akwa oyi na snow kpuchie elu ugwu ahụ. Okpukpo nke ihe a kwuru dị iche na oge. Otú ọ dị, ọ nwere ice na-adịte aka. Nke a na-eme ka gbakọọ ogologo ugwu ahụ adabaghị kpamkpam. Nke a na - eme n’obere ọnụ ọnụ ugwu snow kpuchiri. N'ime obodo Mont Blanc, anyị na-ahụ ọtụtụ ọnụ ọnụ na otu ugwu mgbatị kachasị ogologo nke dị na kọntinent Europe. Ndagwurugwu a karịrị mita 3.500 n’ogologo.
Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa maka ndị ugwu na maka ịma mma nke mbara ala, mana enwekwara ọtụtụ ndagwurugwu ndị nwere ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa na mkpọda nke massif. E nwere ọtụtụ glaciers na-emebi akụkụ nke ugwu. Nnukwu glacier bụ Mer de Glace. Ọ bụ nnukwu glacier na France ma sụgharịa oke osimiri ice.
Ntughari Mont Blanc
Ọ bụ ugwu nwere ihe karịrị 300 nde afọ. Agbanyeghị, oke okwu iji mezue nguzobe ya n'ozuzu ya ihe dịka afọ 15 gara aga. Ihe owuwu a gbachiri kpamkpam ebe obu na nguzo ya bu ihe mejuputara ala nke uwa site na mmeghari nke uwa. Ebe ọ bụ na efere dị n'oké osimiri na kọntinent nwere ihe dị iche iche na njedebe njedebe nke otu na nke ọzọ na-eme ka ha kpọọ nkụ n'ugwu ndị a.
N'oge a mgbe e guzobere Mont Blanc, Pangea bụ naanị nnukwu mba. Anyị na-ekwu maka oge Paleozoic. Ọ bụ ebe a ka nnukwu mba ahụ malitere ịgbawa ma mechara kewaa n'ime ọtụtụ ala. Usoro ndị a na-eme n'ime ụwa akwụsịghị n'oge ọ bụla. Okwesiri iburu n'uche na usoro nke tectonics efere ka na-aru oru taa. Maka nke a, n'ime ọtụtụ nde afọ, mmegharị gara n'ihu na-eme na eriri ụwa, na-ewepụta Mont Blanc.
Ugbua na njedebe nke Oge Cretaceous, efere Apulian na Eurasia malitere imekọ ibe ha. Njikọ a nke efere tectonic mere ka eriri strata na nkume sedimentary na-ebili n'ụdị folds. A na-eche Mont Blanc ka ọ bụrụ ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị karịa akụkụ nke nnukwu ugwu dị egwu nke mmiri si n'oké osimiri. Otutu ndi mmadu n'ozuzu ha na-ebili elu n'ihi nrụgide nke efere Africa na-arụ n'ime 100 nde afọ gara aga.
Ementslọ ndị ahụ nwere kristal bụ ụdị nkume mebere Mont Blanc. E guzobere ụlọ ndị a n'okpuru mgbidi nke nkume ahụ n'ihi nrụgide nke tectonic plate. Nke a mere ka ugwu ahụ nwee ugwu nke mbibi nke ụdị glaciers dị iche iche kpatara. N'ozuzu ya, ọdịdị ọdịdị nke ihe a niile nyere ọdịdị dị larịị nke na-echetara mma.
Flora na anụmanụ nke Mont Blanc
Ọ bụ ezie na ugwu a nwere ọmarịcha ịma mma maka ịnwe akụkụ ice, ọ nwekwara ọdịiche dị mma na ahịhịa ndụ gbara ya gburugburu. Ọ bụ naanị na ọ dị mkpa ịhụ na n'akụkụ niile nke ahịhịa ndụ nwere ọtụtụ anụmanụ na ụdị ahịhịa. Ọtụtụ ụdị a na-eleta ugwu dị iche iche na-eche ihu elu, obere okpomọkụ na acidity nke ala. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, ịlanarị na mpaghara a bụ ihe mgbagwoju anya maka ụdị iche iche dị iche iche bi ebe a. O sina dị, mmegharị na evolushọn pụtara na ụdị niile nwere ike ịdị ndụ.
N'oge opupu ihe ubi na ọkọchị, ụfọdụ ụdị ahịhịa na ahịhịa, ahịhịa na obere osisi ndị ọzọ na-eto n'akụkụ ala nke ugwu ahụ. Akụkụ ala a nwere ọnọdụ gburugburu ebe obibi mara mma karị maka ụdị a. Gburugburu massif anyị nwere ike ịchọta conifers dị ka firs na larches. Fọdụ ụdị dịka Ranunculus glacialis nwere ike ịdị elu ruo mita 4.000 n'ịdị elu.
Banyere ụmụ anụmanụ, anyị hụrụ na chamois, mgbada uhie, nkịta ọhịa na-acha uhie uhie, ntụpọ mmiri, butterflies, ugo ọla edo, nla na ụfọdụ ụdị ududo na akpị na-anọchi anya ya. Ọ bụghị ha niile bi n’elu ugwu ka ụfọdụ, mana ụfọdụ nwere ike ịrịgo n’ebe dị naanị sọsọ snow. Ha dị elu dị ihe dị ka mita 3.500 n'ịdị elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Mont Blanc na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Mont Blanc